Askar Dowlada Federaalka Looga Dilay Gobalka Shabeelada Dhexe. – Calamada.com
Askar Dowlada Federaalka Looga Dilay Gobalka Shabeelada Dhexe.
calamada December 6, 2016 1 min read
Wararka ka imaanaya degmada Jowhar ee gobalka Shabeelada dhexe waxey sheegayaan in galinkii dambe ee maanta tiro askar ah oo ka tirsan dowlada Ridada federaalka lagu dilay duleedka degmadaasi.
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ayaa weerar dhabba gal ah u dhigay kolanyo ka tirsan maleeshiyaatka dowlada federaalka kuwaasi oo la socday gudoomiyaha maamulka Xasan Garguurte ugu magacaaban deegaanka Biyo cadde oo hoostaga degmada Mahadaay ee gobalka Shabeelada dhexe.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay in kamiinkaasi lagu dilay afar askari oo ka tirsan maleeshiyaatka dowlada Ridada kuwaasi oo sidoo kale laga qaatay qoryihii ay wateen.
Gudoomiyaha maamulka dowlada federaalka ee deegaanka Biyo cadde ayaa la xaqiijiyay in si dirqi ah uu ku badbaaday, sidoo kale tiro askar ah oo maleeshiyaatka dowlada ah ayaa lagu dhaawacay weerarkaasi.
Maalmo ka hor ayeey aheed markii la dhaawacay gudoomiyaha dowlada Ridada federaalka ugu magacaaban degmada Jalalaqsi ee gobalka Hiiraan sidoo kalane la dilay tiro askar ah oo ka tirsan ilaaladiisa kadib kamiin loogu dhigay wadada isku xirta degmada Jalalaqsi iyo deegaanka Ceelbaraf oo ka kala tiran gobalada Hiiraan iyo Shabeelada dhexe.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Idaacadda Andalus 07-03-1438 Hijri.
Next: Dhageyso Darsiga 15-aad Ee Kitaabka Akhlaaqul Mujaahid.